Ahoana no hametrahana azy? FSX amin'ny Windows 8 / 8.1 / 10?
Fanontaniana momba ny simulators, add-ons sy tranokala
To install FSX (ireo dikan-teny rehetra) ao amin'ny Windows 8 / 8.1, manaraka ireto dingana ireto:
1- Install FSX amin'ny DVD.
2- Rehefa vita ny fametrahana dia tsindrio ny « fsx.exe »(hitanao eto izany: C: \_ Program Files (x86) \_ Microsoft Games \_ Microsoft Flight Simulator X). Eto, safidio ny «Compatibility» vakizoro ary apetraho ny varavarankely toy ny aseho etsy ambany:
3- Download potika ny 32 dikan-« UIAutomationCore », Aforeto ny rakitra ary ampidiro ao FSXfampirimana lehibe (C: \_ Program Files (x86) \_ Microsoft Games \_ Microsoft Flight Simulator X \_). Hanitsy ny olan'ny fianjerana tsy ampoizina amin'ny FSX.
Ankehitriny, aorian'ireo dingana kely ireo, FSX tokony hiorina amin'ny Windows 8 / 8.1 sy 10
amin'ny Alahady 09 Aogositra	by rikoooo